1. CRBT 10 days free campaign ဆိုတာဘာလဲ?
CRBT အသုံးမပြုရသေးသည့် users များသည် CRBT ၀န်ဆောင်မှု ကို ၁၀ ရက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CRBT ၀န်ဆောင်မှု ရယူထားပြီးသူများအတွက်ကိုတော့ သီချင်း အခမဲ့ ၁၀ ရက် အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကမ်းလှမ်းသွားမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းသည့် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
2. CRBT ၀န်ဆောင်မှု အခမဲ့ ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ?
CRBT ၀န်ဆောင်မှု မရယူထားသူများကို အစမ်းအနေဖြင့် အခမဲ့ ၁၀ ရက် အသုံးပြုနိုင်ရန် SMS ဖြင့် ကမ်းလှမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Offer message: ဂုဏ်ယူပါတယ်။ MPT Ring Tune ၀န်ဆောင်မှုကို 10 ရက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် လူကြီးမင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ယခုပဲ 1 ဟုရိုက်၍ 94900 သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း SMS ပေးပို့ လိုက်ပါ။ (SMS ရရှိသူများသာ) အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT call center 106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
3. ၀န်ဆောင်မှု ကို အခမဲ့ အသုံးပြုရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ကမ်းလှမ်းသည့် SMS ရရှိပါက အသုံးပြုသူအနေဖြင့် 1 ဟုရိုက်၍ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ လာသော ကုတ် 94900 သို့ မက်ဆေ့ခ်ျ ပြန်လည်ပေးပို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နောက် ၀န်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ ရယူပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် မက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပါ။ ကမ်းလှမ်းသည့် SMS ရရှိသူများသာလျှင် ၀န်ဆောင်မှု အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာပါ။
Informing SMS: MPT Ring Tune ၀န်ဆောင်မှု 10 ရက် အခမဲ့အစီအစဉ် ရယူမှုအောင်မြင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခမဲ့အသုံးပြုရန် ကုတ်နံပါတ် ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၄ကျော်ပြီးပေးပို့ ပါက ၀န်ဆောင်မှုမရရှိပါ။ ထို့ နောက် အောက်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျကို လက်ခံရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။
Informing SMS: MPT Ring Tune ၀န်ဆောင်မှု အခမဲ့ကာလ ပြီးဆုံးသွားပါသဖြင့် ရယူမှု မအောင်မြင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4. အခမဲ့ကာလပြီးဆုံးသွားရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ?
အသုံးပြုသူသည် အခမဲ့ ကာလ ၉ ရက်မြောက်နေ့ တွင် (သက်တမ်းတိုးရန် ၁ရက်အလို) သတိပေးမက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျတွင် နောက်တစ်ရက်တွင် ၀န်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရပ်တန့် လိုပါက ရပ်တန့် ရန် ပေးပို့ ရမည့်စာသား ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Reminder message: MPT Ring Tune အခမဲ့အစီအစဉ် ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီး ၁၀၅၀ ကျပ်ဖြင့် တစ်လစာ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့် လိုပါက UNR ဟုရိုက်၍ 7979 သို့ SMS ပေးပို့ ပြီး ရပ်တန့် နိုင်ပါတယ်။
5. ၀န်ဆောင်မှုအတွက် သက်တမ်းတိုး ရန် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက ဘာဖြစ်မှာပါလဲ။
၀န်ဆောင်မှုအတွက် သက်တမ်းတိုး ရန် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက သက်တမ်းတိုးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူသည် သက်တမ်းတိုး မအောင်မြင်သည့် မက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပါ။ အသုံးပြုသူ ငွေဖြည့်သွင်းသည့်အခါ ၀န်ဆောင်မှုကို သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
6. အသုံးပြုသူသည် သီချင်း ထပ်မံဝယ်ယူပါက ဘယ်လို ဖြစ်မှာပါလဲ?
အသုံးပြုသူသည် အခမဲ့ကာလအတွင်း သို့မဟုတ် ပြီးနောက် သီချင်းဝယ်ယူပါက သီချင်းဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ် တစ်လစာ ကျသင့်မှာပါ။
7. CRBT သီချင်းအခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ?
CRBT ၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသည့် အသုံးပြုသူများကို သီချင်းတစ်ပုဒ် အခမဲ့ ၁၀ ရက် အသုံးပြုနိုင်ရန် မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ ကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Offer message: ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဟန်ထွန်း၊ဂျီလတ်၊ သအို၊ဝေလ တို့ရဲ့ မူလလေးဖြာ သီချင်းကို MPT Ring Tune အဖြစ် 10 ရက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် လူကြီးမင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ယခုပဲ3ဟုရိုက်၍ 94900 သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း SMS ပေးပို့ လိုက်ပါ။ (SMS ရရှိသူများသာ) အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT call center 106.
8. သီချင်း ကို အခမဲ့ အသုံးပြုရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ကမ်းလှမ်းသည့် SMS ရရှိပါက အသုံးပြုသူအနေဖြင့်3ဟုရိုက်၍ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ လာသော ကုတ် 94900 သို့ပြန်လည်ပေးပို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နောက် သီချင်းကို အခမဲ့ ရယူပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် မက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပါ။ ကမ်းလှမ်းသည့် SMS ရရှိသူများသာလျှင် သီချင်းကို အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာပါ။
Informing SMS: MPT Ring Tune 10 days အခမဲ့သီချင်းအသုံးပြုခြင်း ရယူမှုအောင်မြင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခမဲ့အသုံးပြုရန် ကုတ်နံပါတ် ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၄ ကျော်ပြီးပေးပို့ ပါက အောက်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျကို လက်ခံရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။
Informing SMS: MPT Ring Tune သီချင်းဝန်ဆောင်မှု အခမဲ့ကာလ ပြီးဆုံးသွားပါသဖြင့် ရယူမှု မအောင်မြင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
9. အခမဲ့ကာလပြီးဆုံးသွားရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ?
အသုံးပြုသူသည် အခမဲ့ ကာလ ၉ ရက်မြောက်နေ့ တွင် (သက်တမ်းတိုးရန် ၁ရက်အလို) သတိပေးမက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျတွင် နောက်တစ်ရက်တွင် သီချင်းသက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် သီချင်းဖျက်ချင်ပါက ပယ်ဖျက်ရန် ပေးပို့ ရမည့်စာသား ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Reminder message: , အဆိုရှင် , သီချင်းကုတ် သီချင်းအခမဲ့အစီအစဉ် ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီး ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် တစ်လစာ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့် လိုပါက Del ဟုရိုက်၍ 7979 သို့ SMS ပေးပို့ ပြီး ရပ်တန့် နိုင်ပါတယ်။
10. သီချင်းအတွက် သက်တမ်းတိုး ရန် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက ဘာဖြစ်မှာပါလဲ။
သီချင်းအတွက် သက်တမ်းတိုး ရန် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက သက်တမ်းတိုးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသည် သက်တမ်းတိုး မအောင်မြင်သည့် မက်ဆေ့ခ်ျ လက်ခံရရှိမှာပါ။ အသုံးပြုသူ ငွေဖြည့်သွင်းသည့်အခါ သီချင်းကို သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
11. အသုံးပြုသူသည် အခြားသီချင်း ထပ်မံဝယ်ယူပါက ဘယ်လို ဖြစ်မှာပါလဲ?
အသုံးပြုသူသည် အခမဲ့ကာလအတွင်း သို့မဟုတ် ပြီးနောက် အခြားသီချင်းဝယ်ယူပါက သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်ပုဒ်လျှင် ၃၁၅ ကျပ် တစ်လစာ ကျသင့်မှာပါ။
ခေါ်ယူနားဆင် တေးသံစဉ် ပင်မစာမျက်နှာ ►